Laxman | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका Laxman – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
लक्ष्मण लामिछानेका केही मुक्तकः
केहि पाए जस्तो केहि गुमाए जस्तो
लाग्छ मेरै वरिपरी झन नपाए जस्तो ।
दिल भित्र गहिरो चोट हुदा हुदै पनि,
बाहिर कतै हराए कतै मुस्कुराए जस्तो ।।
तिमिले मेरो दिल बिगार्यौ मन बिगार्यौ
हेर्दै छु दिनानु दिन झन झन बिगार्यौ ।
प्रेमको यो फुलबारिबाट मलाइ हटाइ,
पराइ सँग मन साट्दै जोवन बिगार्यौ ।।
Posted in टुक्रे कविता, मुक्तक	| Tagged Lamichhane, Laxman, Pallawa, पल्लव, लक्ष्मण लामिछाने	| Leaveacomment
लामिछानेका केही मुक्तक
जीवन एक संघर्ष र चुनौती हो, सहमति गर।
सफलताको बाटोमा लम्किन्छौ भने अति गर।।
प्रैत्रिक सम्पत्ति र बुबा आमाको भरमा नपरि,
आफ्नो खुट्टामा ऊभिन सक्ने ऊन्नति प्रगति गर।।
देखावटि नियममा पानिको पानि दुधको दुध बनाएर।
त्यहि आमाको छोरालाई विर गोर्खाली सपुत बनाए।।
यो सत्य हो, जन्मिन्छ संसारमा सबै एउटै जात बाट,
धमण्ड किन? म ठुलो त सानो जातको अछुत बनाएर।।
लक्ष्मण लामिछानेका केही मुक्तकहरूः
तिम्रो खुसि मेरो दु:ख आसु पिलाएर फर्कनु।
चाहान्छु! जित तिम्रो हार मेरो मिलाएर फर्कनु।।
इजालासमा हामि दुवै उपस्थितको प्रमाण हुनेछौ,
गल्ति तिमीबाटै, सजाए मलाई दिलाएर फर्कनु।।
राम्रो हुन्न हाम्रो सम्बन्ध छुटायौ उनी भन्छिन्।
तिम्लार्इ माया गर्ने मन झन दुखायौ उनी भन्छिन्।।
एकपल पनि बाँच्न म सक्दिन तिमी बिना अब,
कस्ले माया गर्ला मलाई रूवायौ उनी भन्छिन्।
लामिछानेका केही मुक्तकहरूः
भक्कानिए, आमा_बुबाको मन थमाएर।
बिदेशिनु पर्ने भो, आफ्नै मुटु समाएर।।
दु:ख पिडा जस्तो पर्छ त्यस्तै झेलिन्छ,
भित्र लुकाए गहको आँसु बाहिर रमाएर।।
हामि एक अर्काको जरूर भएर बसैला।
त्यहि बाचा कसममा मंजुर भएर बसैला।।
केहि बर्ष कुरेर बस्नु जन्ति लिइ आउला,
अनि तिमी सिउदो म सिन्दुर भएर बसैला।।
लक्ष्मण लामिछानेका केही मुक्तक
तृच्छ बचन नबोल छाति चर्कन सक्छ।
बिचराको! मन दुख्दा आँसु दर्कन सक्छ।।
आज गरिब छ भनेर किन त्यसरि हेप्छौ?
भोलि उसको पनि दिन फर्कन सक्छ।।
म मुटु झिकेर दिन्छु सक्छौउ फुटाएर देखाउ।
जस्तो नङ र मासुको सम्बन्ध छुटाएर देखाउ।।
जीन्दगी जीउन दुई धारको अन्तिम बिल्कपमा,
कि परिवारको कि मेरो साइनो टुटाएर देखाउ।।